स्वास्थ्यमा प्रशासनका सचिव चिकित्सक संघलाई अस्वीकार्य – Health Post Nepal
स्वास्थ्यमा प्रशासनका सचिव चिकित्सक संघलाई अस्वीकार्य
२०७५ मंसिर २३ गते १९:५२
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रशासन समूहका सचिवलाई दिने गरी गरेको सरुवाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले सघर्ष गर्ने जनाएको छ ।सरकारले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भोलि छलफलपछि यसविरुद्ध संघको आधिकारिक धारणा राख्ने बताए । ‘जनआन्दोलनपछि संघले संघर्षबाट स्थापित गरेको व्यवस्थामाथि फेरि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’ सो निर्णयबारे संघर्षमा उत्र्रिन देशबाट चिकित्सकहरुले संघलाई दबाब दिइरहेको समेत डा.कार्कीले बताए ।
उनले संघर्षको स्वरूप भने, मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरेर निर्धारण गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा ऐन आउँदा चिकित्सक सचिव हुने बाटो खोलिएको र त्यसपछि त्यसैलाई लागू गर्दै आएकोमा दोस्रोपटक यो अधिकारमाथि प्रहार भएको बताए । उनले सरकारको यो कदमले देशभरको स्वास्थ्यसेवा धानिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने भन्दै चिकित्सकको भूमिकाको अपमान नगर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।
संघले बारबार आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले २८ महिनासम्म श्रेष्ठलाई नै सचिव राखेको थियो । श्रेष्ठ हटेपछि डा. सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।
यसअघि खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा चिकित्सकले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर स्वास्थ्यमा ल्याएका थिए । संघले बारबार आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले २८ महिनासम्म श्रेष्ठलाई नै सचिव राखेको थियो । श्रेष्ठ हटेपछि डा. सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।
पछिल्लो समय डा. चौधरीले कसैलाई नटेरेको र आफ्नै समुदायका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सताएको भन्दै उनीप्रति चिकित्सकहरू समेत असन्तुष्ट बनेका थिए । सोही आधारमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो । चौधरी गएपछि डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चिकित्सक हटाए पनि चिकित्सकलाई नै जिम्मेवारी दिएको भन्दै संघ नेतृत्व मौन बसेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रशासनका सचिव आएपछि संघले संघर्ष बढाउँदै जाने जनाएको छ ।
यो विषयमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का पदाधिकारीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।